अमीरात एयरलाइन्स क्यारियर - ग्लोबल एयरवे रोजगार - आज सीवी अपलोड गर्नुहोस्!
अमीरात एयरलाइन्स क्यारियर - आज पुनः सुरू गर्नुहोस्!
हैदराबाद नौकरिहरु हैदराबाद, मुम्बई र चेन्नई मा
सेप्टेम्बर 28, 2018
अमीरात एयरलाइन्स क्यारियर
अमीरात एयरलाइन्स क्यारियरहरू दुबई सिटी कम्पनी गाइडसँग। सामान्यतया, हामी ग्लोबल एअरव्याड कार्यका लागि रिक्त पदहरूको लागि लेखिरहेका छौं। र तपाईं हाम्रो पृष्ठमा जानु भएकोले। तपाईले हाम्रो कम्पनी सेक्शनहरू भ्रमण गर्नुपर्छ। रोजगारका लागि हाम्रो जानकारी पढ्नुहोस्। र हाम्रो एचआर टीमले तपाईंलाई आज रोजगार पाउन कसरी मद्दत गर्दछ हेर्नुहोस्। ठिक छ, रोजगार यो भनेको छैन् कि द्रुत बृद्धि भएको एयरलाइन क्षेत्र। पक्कै तपाईं भाँडा लिन सक्नुहुन्छ। कम्पनीहरु को सबै भन्दा राम्रो हो उत्कृष्टताको लागि 400 भन्दा बढि अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कारहरूसँग। र तिनीहरूको स्तर अप गर्न कठिन छ। सकारात्मक पक्ष मा, अधिकतर फर्म प्राप्त गर्दैन अन्तर्राष्ट्रिय मुनाफा बिना यो स्थिति। उदाहरणको लागि भारत र पाकिस्तानको विश्व-कलेजको कार्यबल।
हवाईअड्डा वा हवाई जहाजमा काम गर्दा। The नयाँ कार्यकर्ताले नयाँ कौशलहरूको धेरै सिक्न सक्नेछ। र निस्सन्देह, ती सबै महत्त्वपूर्ण हुनेछन्। प्रत्येक वर्ष, अमीरात एयरलाइन्स क्यारियर कार्यकारीहरू। निश्चित रूपमा कम्पनीहरूमा यसको सामेल हुने समय मनाउँछ। किनभने तपाईं कम्पनीमा सम्मिलित हुनुभयो। निश्चित रूपमा तपाइँ तपाइँको जीवनशैली चिह्नित गर्दै। यो मात्र काम गर्दैन। किनकि यो एक दीर्घ-अवधि प्रक्रिया हो। उदाहरण को लागी विश्व को चारै तिर बैठक। सकारात्मक पक्ष मा, सफलता र उल्लेखनीय बृद्धि। उदाहरण को लागी, इतिहाद र कतर एयरवेजहरू असाधारण रूपमा जाँदैछन्। अर्कोतर्फ, अमीरात समूह हरेक वर्ष। रिपोर्टहरू प्रदान गर्ने कि उनीहरूले केही अरबहरूको बढि लाभ उठाउँछन्। र अगाडी बढि, अर्को आर्थिक वर्षको लागि।
एयरलाइन्स सबै भन्दा राम्रो कम्पनीहरू सामेल हुँदै
एक हवाई विमानन संगठनको साथ क्या क्यारियर यसको लायक छ? अमीरातको नौकरी खोजकर्ताको रूपमा उनीहरूको गतिशील दृष्टिकोणले तपाईंलाई अपील गर्दछ ?. यदि तपाईंको जवाफ हो भने हो? हामी स्वागत गर्दछौं तपाईंको प्रोफाइलमा दुबईमा। यसबाहेक, हामी तपाईंलाई दुबई सिटी कम्पनीको बारे बढी जान्न प्रोत्साहन गर्दछौं। सामान्यतया बोलिरहेको छ धेरै उत्साहजनक क्यारियर अवधारणाहरू। उदाहरणका लागि, तपाईं भ्रमण गर्न सक्नुहुन्छ अमीरात समूह क्यारियर केन्द्र। र एयर अरब नौकरिहरु अनुभाग.
त्यसोभए हामी तपाईंलाई सहयोग गर्न तत्पर हुनुहुन्छ। किनकी हामी कम्पनीहरु को आसपास शीर्ष स्तर मा हो। एयरलाइन्स फर्ममा काम गर्दै। तपाईंलाई चाहिन्छ सामान्यतया कम्पनीसँग बोल्नु भनेको एकदम नौकरी प्रदान गर्नुहोस्। त्यहाँ धेरै अमीरात कम्पनीहरू छन् जो भर्ती गर्दै छन्। र यो संग मनमा, तपाईं धेरै फर्महरू सामेल हुन सक्नुहुनेछ। हामीले सिर्जना गरेका कम्पनीहरूको सूची छ। र तिनीहरूसँग सामेल हुनेछ यो अय्यूब माग्नेहरूको लागि एकदम राम्रा विचार। त्यसैले तथ्यको रूपमा यदि तपाई एयरलाइन्स फर्महरूबाट काम गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने राम्रो सुरू हुनेछ। हामी यी कामहरू संयुक्त अरब अमीरातका वरिपरि उपलब्ध गराइरहेछौं। यसबाहेक, इन्डोनेशिया, कुवैत र सिंगापुरमा पनि। जबसम्म तपाईं कम्पनीहरू बढ्न र परिणाम प्राप्त गर्न मद्दत गर्दै हुनुहुन्छ।
साथ सुरू गर्नुहोस् जेट एयरवेज क्यारियर ग्राउण्ड स्टाफ
एमिरेट्स एयरलाइन्स क्यारियर सुरु गर्न। नबिर्सनुहोस् तपाईसँग धेरै अनुभव हुनु पर्छ। विशेष गरी अन्तर्राष्ट्रिय को लागी हावा सडक। साथै मध्य पूर्व र एशिया। अर्कोतर्फ, युरोप र यूएस कम्पनीहरूमा पूर्ण समर्थन र प्रशिक्षण प्रदान गर्दछ। हामीले जेट एयरवेज क्यारियर ग्राउण्ड स्टाफलाई काम गर्ने सबै भन्दा तेज तरिकाको रूपमा उल्लेख गर्दछौं। त्यतिबेला तिनीहरू सँगै छन् केही कार्यहरू लागू गर्न। हाम्रो मानव संसाधन। अमीरात एयरलाइन्स क्यारियरहरू दुबई सिटी कम्पनीसँग। हामी दृढ छौ त्यहाँ तपाईंलाई Arline नौकरी सुरू गर्न सल्लाह.
जेट एयरवेज क्यारियरहरू ग्राउण्ड स्टाफ - यस फर्मको साथ कामदार बन्नुहोस्!
एयरलाइन्समा सर्वश्रेष्ठ कम्पनीहरु काम गर्न
एयर अरब र कतार, सिंगापुर र इतिहाद
एयर इंडिया र केबिन चालक दलहरू - अमीरेट्स एयरलाइन्स क्यारियर
फ्लाईदुबई क्यारियरमा सीवी अपलोड गर्नुहोस् कुवैत एयरवेज क्यारियरहरू। यसबाहेक, सिंगापुर एयरलाइन्स र धेरै अधिक रोजगार संगठनहरू। सामान्यतया, हाम्रो HR फर्म यहाँ छ मद्दत गर्न। र खाडी क्षेत्र वा मध्य पूर्वमा अचम्मको कामको अवसर पाउनुहोस्। हामी अन्तर्राष्ट्रिय कर्मचारीहरु र वरिष्ठ अधिकारियों को लागि धेरै रिक्त पदहरु छन्। साथै भारतबाट काम खोज सेवा प्रदान गर्ने व्यक्ति र पाकिस्तान। सकारात्मक पक्षमा र कतार र पनि सउदी अरब कार्यकर्ता हाम्रो व्यवस्थापन टोलीलाई मार गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसकारण, कृपया हाम्रो कम्पनीको पुन: सुरुवात वा तल कम्पनीहरूको भर्ती गर्न पोस्ट गर्नुहोस् र अचम्मका कामहरू आउन र प्रतीक्षा गर्नुहोस् लाइभ एयरलाइन सपना सुरू गर्नुहोस्। एमिरेट्स एयरलाइन्स क्यारियर ए संग दुबई शहर कम्पनी तपाईलाई पर्खिरहेको छ!.
CV अपलोड गर्नुहोस् FlyDubai क्यारियरहरू र कुवेत एयरवेज क्यारियर। हामी यहाँ छौं मध्य पूर्वमा तपाईंलाई अचम्मको अवसरहरू प्राप्त गर्न मद्दत गर्दछ। दुबई सिटी कम्पनीको साथ एमिरेट्स एयरलाइन्स क्यारियरले अब वाक-इन अन्तर्वार्ता सुरू गरिरहेको छ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय रोजगार खोज्नेहरूको लागि धेरै खाली पदहरू छन्। साथै भारत र पाकिस्तान र कतारका मानिसहरू पनि। हाम्रो कम्पनी वा तलका कम्पनीहरूमा पुनःसुरु पोस्ट गर्नुहोस्।
दुबई सिटी कम्पनी र काम गर्ने कम्पनीहरूको सूची!
संसारमा उत्तम एयरलाइन्स काम गर्ने!
विश्वमा काम गर्नका लागि सबै भन्दा राम्रो संगठन। एयरलान कम्पनीहरूका लागि काम गर्नु हो। नकरात्मक पक्षमा, संसारमा कुनै पनि नराम्रो एयरलाइन्सहरू छैनन्। किनकि हामी ती सबै प्रयोग गर्दै छौं। त्यसो भए मार्कर जहिले पनि चल्दै जान्छ। यस कुरालाई ध्यानमा राख्दै, हाम्रो कम्पनीले उडान कम्पनीहरूले काम गरिरहेको छ। र के क्षतिपूर्ति वा तलब र जहाँ तपाइँ पैदल-इन साक्षात्कार प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। सामान्यतया भन्ने हो भने, तिनीहरूमध्ये केही अचम्मित रोजगार खोज्नेहरू हुन्। धेरै कम्पनीहरू छन् मध्य पूर्व मा भाडामा लिए।
त्यसोभए, तपाईं यो खण्डसँग के गर्न सक्नुहुन्छ। कम्पनी को छठे वार्षिक वार्षिक भर्ती को जानकारी को टुकडे को आवश्यकता छ। एयरलाइन्स उद्योगको रोजगारको बारेमा मुख्य जानकारीलाई मार्नुहोस्। यसबाहेक, सेवाको गुणमा आधारित। एक व्यक्तिले जाँच्ने कम्पनीमा नौकरी प्राप्त गर्न लायक छ भने जाँच गर्न सक्छ। अर्कोतर्फ, तपाईं एक अन-कार्य प्रदर्शन हेर्न सक्नुहुन्छ। र जहाँ पनि एक फिलिपिनो कार्यकर्ताको रूपमा लागु हुन्छ। यसबाहेक, विदेशबाट कामहरूको प्रशोधनको दाबी गर्नुहोस्। र समग्र स्कोरमा कामका लागि के आवश्यक छ भनेर जाँच गर्न। यस अमीरात एयरलाइन्स क्यारियर कम्पनीसँग। केवल तपाईंको लागि एक टिप उनि रूसी कर्मचारीहरु लाई भर्ती गर्दै छन्.
सर्वोच्च रैंकिङ एयरलाइन्सले उत्तम अनुभव प्रदान गर्दछ। र यो संग दिमाग मा, हामी वेतन को बारे मा कुरा गर्दै छन्। यसबाहेक, ग्राहक सेवा यी कार्यहरूको मुख्य कुञ्जी हो। त्यसैले, तपाईंलाई यसलाई प्राप्त गर्न लक्जरी बनाइएको CV प्रदान गर्न आवश्यक छैन। तपाईंले गर्नु आवश्यक छ केवल तस्वीरमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि संयुक्त अरब अमीरातसँग कतर, कुवैत र सिंगापुर हेर्न स्क्रोल गर्नुहोस्। अमीरात एयरलाइन्स क्यारियरका लागि काम गर्ने संसारमा सबैभन्दा उत्तम एयरलाइन्स। र हामी सङ्ग्रहमा सङ्गठित गर्न सजिलो र तिनीहरूको समग्र नौकरी नियुक्ति स्कोर द्वारा आदेश।
संसारभरि सबै भन्दा राम्रो एयरवेज क्यारियरहरू!
तल तपाईंसँग कम्पनीहरूको सर्टकट छ तपाईंले आफ्नो सीभी पठाउनु पर्छ। र यो दिमागमा, तल स्क्रोल गर्नुहोस् र तपाइँले धेरै वर्णनहरू देख्नुहुनेछ। त्यसो भए, एमिरेट्स एयरलाइन्स क्यारियर यदि तिनीहरू तपाईंको लागि सही छन्। तपाईं द्रुत अनुप्रयोग अनलाइन आफैंलाई व्यवस्थित गर्न सक्नुहुन्छ। आशा छ तपाईंले गर्नुहुनेछ सकारात्मक परिणाम पाउनुहोस् अमीरात एयरलाइन्स क्यारियरमा एक दुबई सिटी कम्पनी संग। कम्पनी नाम र अनुप्रयोग लिंकमा तल क्लिक गर्नुहोस्।
खाडी वायु क्यान्सर
ब्रिटिश एयरवेज क्यारियरहरू
एयर अरब क्यारियरहरू
वायु भारतको काम
एटिहाद एयरवेज क्यारियर
वायु क्यारियरहरू जानुहोस्
जेट एयरवेज क्यारियरहरू
कतार एयरवेज क्यारियरहरू
सिंगापुर एयरलाइन्स क्यारियरहरू
अमीरात एयरलाइन्स क्यारियरहरूको लागि किन उपयुक्त छ?
यी दिन, धेरै नौकरी खोज्नेहरू। हेर्दै उच्च भुक्तानीको कामका लागि। र केवल ठूला कम्पनीहरूले त्यो प्रदान गरिरहेका छन्। शीर्ष 10 अमीरात एयरलाइन्स क्यारियर अवसरहरू। सजिलैसँग एक बर्षमा N 150,000 भन्दा बढी छन्। दुबई सिटी कम्पनीले कार्यकारीहरूलाई पनि काममा लगाएको छ। थप, हामी यहाँ तपाईलाई सहयोग गर्न आएका छौं। तथ्यको रूपमा, एमिरेट्स आउँछ र दुबई पनि उडान गर्दछ। हाम्रो टीम अगाडि हेर्दै छ तपाईंलाई उनीहरूको कर्मचारी बन्न मद्दत गर्न मद्दत गर्दै। किनभने तिनीहरूको व्यवसायमा उनीहरू सकेसम्म धेरै व्यक्तिहरू प्राप्त गर्नु हो। सामान्यतया, अचम्मको काम खोज्दै यो समय लिइरहेको छ। 80% भन्दा बढी एयरलाइन्स क्यारियरहरूको। तपाईंले धेरै सीपहरू सिक्नुपर्नेछ। उदाहरण मध्ये एक ग्राहक सेवा कौशल र वित्तीय अधिकारीहरु हो। मानव संसाधनको साथसाथै। त्यसैले सम्भावित कम्पनीहरूको सयौं कसले तपाईलाई काममा लगाउन सक्छ तपाईलाई तालिम दिन आवश्यक पर्दछ.
तर हामी मात्र तिनीहरूमध्ये केही चयन गर्नेछौं। किनभने हामी जान्दछौं कि यदि तपाईं शीर्ष 20 वा तिनीहरूलाई 30 सँगसँगै जानुहुन्छ भने। र त्यो तरिका दुबईमा एक काम खोज्ने मौका यो वृद्धि हुनेछ। र हामी सबै भन्दा उत्कृष्ट कम्पनीहरू जस्तै। त्यहाँ कुनै शंका छैन कि सबैभन्दा राम्रो मध्य मध्यमा आधारित छ। निस्सन्देह कतार सऊदी अरब संयुक्त राज्यमा पनि। अमीरात एयरलाइन्स दुबई सिटी कम्पनीसँग क्यारियर तपाईंको मुख्य सम्झौता हुनेछ.
जीवन शैली र कार्यको स्तर
यस प्रकारको कम्पनीहरूमा एक सम्भावित कर्मचारीको रूपमा। तपाईं ठूलो आय उत्पन्न गर्न र एक अचम्मको जीवन शुरू गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईंको बचत निश्चित रूपले बढ्दो र जीवनको लागत यो कम हुनेछ। कुन कम्पनिहरु राम्रो छन् भनेर भन्न गाह्रो छ। किनभने ती सबै उनीहरूका ग्राहकहरूलाई अद्भुत सेवाहरू प्रदान गर्दछन्। साथ साथै कर्मचारीहरू र कर्पोरेट संस्कृतिको व्यवस्थापन स्तर। त्यसो भए आधारभूत कामबाट सुरू गरौं।
दुबई सिटी कम्पनी एक धेरै मा कामदारहरूको लागि छोटो कटौती। तपाईंलाई एयरलाइन्स व्यवसायको सबै भन्दा राम्रो स्तरहरू देखाउँदै। व्यापार लगानीकर्तालाई नयाँ दृष्टिकोण बाट। त्यो सबै काम खोजी गर्नेहरूको लागि हो। यस व्यवसायको केवल एक स्तर भिन्नताहरू छन्। बिभिन्न सेक्सनहरूको लागि तल हेर्नुहोस्। आफुलाई आशा छ कि तपाई आउनुहुनेछ यस प्रकारको व्यवसायको बारेमा एकदम बढी पत्ता लगाउनुहोस्.
आधारभूत अमीरात एयरलाइन क्यारियरहरू
तपाईं आश्चर्यचकित हुनुहुनेछ। प्रविष्टि-स्तर रोजगारहरूमा काम गर्दा तपाईं कति कमाई गर्नुहुन्छ भन्ने बारेमा। विशेष गरी एयरलाईनको साथ कारको काम। त्यसोभए, सामान्यतया बोल्दै तपाईले पाउन सक्नुहुने सब भन्दा आधारभूत रोजगार खाली ठाउँहरू हुन् अचम्म दुबई शहरमा। सफा गर्ने कामहरू, गृहमन्त्री र ग्राहकहरू सेवा पनि हुन्। र ग्राहक बिक्रीका लागि बिक्रीका लागि पर्खँदै। तथ्यको रूपमा, आधारभूत ग्राहक सेवा कर्मचारीहरू जाने राम्रो छन्। अर्कोतर्फ, हामी तपाईंलाई अझ राम्रो तरिकाले ब्राउज ब्राउज गर्दछौँ। तिनीहरू टिकट बिक्री र सामान्य सामान कर्मचारीसँग काम गर्छन्। एयरलाइन्स बेचेको रूपमा कार्यालय र कार्यालय व्यवस्थापन.
उदाहरणका लागि, तपाईं आफैलाई प्राप्त गर्न र अनलाइन सेवा बिक्री सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। केवल सकारात्मक पक्षको इन्टरनेट बढ्दै गएको छ। त्यसैले, तपाईंसँग हुनेछ काम गर्न राम्रो र राम्रो ठाउँ। त्यसो गरौं कि तपाईं कार्यालयमा काम गर्न सक्नुहुन्छ। र लामो अवधिमा तपाई एक नयाँ कर्मचारी सदस्य हुन सक्नुहुन्छ। उदाहरणका लागि, धेरै आधारभूत सेवाहरू सुरू गर्नुहोस्। धेरै राम्रो प्रवेश स्तरमा कार्य अवसरहरू कामहरू कार भाडामा लिइरहेका छन्। अहिले एयरलाइन्सको कारण कम्पनीहरु टर्कीमा अन्य फर्महरूसँग काम गर्दै.
उद्योग भित्र प्रवेश स्तर कार्यहरू
प्रत्येकका लागि सय सेवाहरू छन् कम्पनीहरू तपाईले काम गर्न सक्नुहुनेछ। यो उदाहरण को एक उदाहरण को सबै भन्दा अन्य मा वयस्कों को सेवा गर्दै छ यो श्रम को प्रकार को प्रकार हो। केवल किनकी यो गर्न कठिन छ कि सबैले यो गर्न लाभ उठाउन सक्दैन। तालिकाहरू सफा गरेर रद्दीटोकरी लिनुहोस्। वा फर्श पोलिश पनि। त्यो हो रोजगारहरू जुन तपाईंले प्रवेश स्तरको अपेक्षा गर्न सक्नुहुन्छ। अवश्य पनि, यदि तपाईंसँग अद्भुत शिक्षा छ भने तपाईं एक प्रशिक्षण प्रबन्धकको रूपमा सुरू गर्न सक्नुहुन्छ। र यो दिमागमा राख्दा, तपाईको तलब बिस्तारै बढ्नेछ। तर हुन सक्छ तपाईं एक धेरै राम्रो कुरा को लागी सक्षम हुन सक्नुहुन्छ। विशेष गरी अबु धाबीको दुबई शहरमा ज्याला लिएर। दुबई शहर कम्पनी संग अमीरात एयरलाइन्स क्यारियर निश्चित रूप मा यो जान लायक छ।
मध्य व्यवस्थापन एयरलाइन्स जॉब्स
आधारभूत स्तर मध्य पछि अर्को स्तर व्यवस्थापन अवसरहरू। र यस प्रकारको कामहरूमा तपाई एक ठीक स्थिति हुनुहुन्छ। तर तपाईंलाई चाहिन्छ दुबईमा कामका लागि बढ्दै। एयरलाइन्स इंडस्ट्रीजको कारण। म पनि बढ्छु र त्यसपछि भविष्यमा बढ्दै जान्छु। त्यसैले तिनीहरूले4को लागी 10 को लागि यो स्थिति दिनेछ। र तपाईंलाई सफल हुन सहयोग गर्नुहोस्। कुनै पनि डिस्प्ले तपाईंले ग्राहकहरूलाई पनि सेवा गर्न आवश्यक पर्दछ। किनभने तपाईं हुनेछौं प्रविष्टि स्तर र वरिष्ठ प्रबंधन बीच त्यसो भए। मैले निर्देशक बोर्डलाई रिपोर्ट गर्नु पर्छ। साथै मानव संसाधन प्रबन्धकहरू, मार्केटिंग प्रबन्धकहरू, अपरेसन निर्देशकहरू। ती सबै व्यक्तिहरूले तपाईंको कर्तव्यहरू जाँच गरिरहेका हुनेछन्। र दिनभरि तपाईंलाई मद्दत गर्दै। अर्कोतर्फ, तपाईंको निरीक्षण गरिएको मतलबको तहत व्यक्तिहरू। यो तपाइँ द्वारा व्यवस्थापन गर्न आवश्यक हुनेछ। त्यसैले यो लामो समय पारी छ।
एयरलाइन्स इंडस्ट्रीजमा प्रबन्धकहरू
त्यसोभए तपाईंलाई 8 घण्टा काम गर्नेछौं। तपाईले घर वायु वाहकमा लिनु भएको अर्को दुई इनाम हुनेछ। एयरलाइन्स इंडस्ट्रीजका प्रबन्धकहरूको 80% भन्दा बढी। 10 वर्ष भित्र डेलिभरी-स्तरमा पुग्ने। किनकी धेरै कम्पनीहरु त्यो गर्व गर्दछन्। त्यो नयाँ निदेशक प्रवेश-स्तरमा सुरु हुन्छ। तीमध्ये धेरैले विज्ञापनहरू पनि औंल्याए। त्यो उनीहरूको उपाध्यक्ष। यस फर्ममा एक नैदानिक ​​सहायकको रूपमा सुरू गर्नुहोस्। त्यसैले कुनै पनि स्थितिले आफैलाई साबित गर्न सक्दैन। र त्यहाँ छ तपाईं पनि पाकिस्तानबाट आएका कहाँ हुनुहुन्थ्यो। यसबाहेक, दक्षिण अफ्रिका वा साउदी अरब। वा ती सबै फिलिपिन्स सबै मानिससँग एयरलाइन संग मौका छ उद्योग करियर अवसरहरू।
वरिष्ठ स्तर प्रबंधन क्यारियर
विश्वभरका धेरै कम्पनीहरू। वास्तव मा आवास प्रदान गर्दै छन् उनीहरूको कर्मचारीको लागि। यदि तिनीहरू विदेशी छन् भने तिनीहरूको घरमा फ्लाइङ्ग टिकटहरू। बच्चाहरु को लागि शिक्षा। र तपाईं जीवन को स्थानांतरण को आश्चर्यजनक। यसको अतिरिक्त, तपाईंलाई प्राप्त गर्न को लागी कि तपाइँ एक ल्याप्टप र खेल कार प्रस्ताव गर्नेछ। त्यसकारण, एयरलाइन्स क्यारियर जाने राम्रो र प्रतीक्षा गर्न लायक छ। यदि तिमी आफैलाई बीएमडब्लुमा बदल्नुहोस्। वा पनि बेंटले संग। र स्विमिंग पूलको साथ मध्यम आकारको घर। यो भन्नु पर्छ, कि व्यक्ति व्यापार थाहा छ। अर्कोतर्फ, यदि तपाईं उच्च प्रगति गर्न चाहानुहुन्छ भने। एक सीईओ को लागी वा त्यहाँ भन्दा उच्च स्तर छ। यो लगानीकर्ता स्तर हो। र त्यहाँ एक स्थान छ जहाँ व्यक्ति वास्तवमा हवाइजहाज उडान गर्छन्। वीआईपी ड्राइभिंग कारका कार्यकारीहरू र आफ्नै हेलिकप्टर पनि छ।
एयर पायलटहरू रोजगार र प्रबन्धकहरू
त्यसोभए यदि तपाईं ठूलो स्विमिंग पूल संग काम खोज्दै हुनुहुन्छ भने। र एक लाखौं जस्तै अचम्मको जीवन शैली। तपाई सँधै सक्नुहुनेछ त्यो दुबई कम्पनीको लागि पाउनुहोस्। त्यहाँ धेरै छन् विदेशीहरू जसले विश्वभरको जागिर पाउँछन्। र जीवनको धेरै राम्रो उच्च स्तर छोड्दै। यस कुरालाई ध्यानमा राख्दै हामी भारतीय र पाकिस्तानीको बारेमा कुरा गर्दैछौं। त्यसोभए यदि तपाईं यो देशबाट आउनुभयो भने। तपाईंले निश्चित रूपमा वरिष्ठ व्यवस्थापन रोजगार प्राप्त गर्नुपर्छ। किनभने अर्कोतर्फ, यदि तपाइँ बढ्नको लागि उत्तम तरिकाहरू खोज्दै हुनुहुन्छ। तपाईं पायलट पनि हुन सक्नुहुनेछ। एयरलाइन उद्योगमा वरिष्ठ व्यवस्थापन कार्यहरू अर्को स्तर हो। उच्च विश्वभरको सशुल्क नौकरी रिक्त स्थानहरू। उदाहरणका लागि, एक वरिष्ठ पायलटले पैसा कमाउँछ। वा अपरेसन प्रबन्धक साथै जिल्ला प्रबन्धक। के मध्य मध्यमा दुवै राम्रो पैसा बनाउने? निस्सन्देह, उनीहरूलाई राम्रो कार चलाउन अनुमति दिन्छ।
व्यापार लगानीकर्ता र एयरलाइन मालिकहरू
यस खण्डमा त्यो ठूलो रकम हो। अधिकांश व्यापारिक लगानीकर्ता र एयरलाइन उद्योग मालिकहरू जुन अरबपति हुन्। अनि निस्सन्देह, त्यहाँ एकदम ठूलो छ राष्ट्रीयता फरक छ। धेरै अमेरिकीहरू र क्यानाडालीहरू। यसबाहेक, संयुक्त अरब अमीरातबाट अरबहरू। सामान्य रूपमा मध्य पूर्व लगानीकर्ताहरूको साथ। व्यवसाय को यस प्रकार को प्रबन्धन। यहाँ सम्म कि महारानी शेख मोहम्मद बिन रशीद पनि यसको एक हिस्सा हो। र निस्सन्देह धेरै पैसा यस प्रकारको व्यवसाय। यसको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार एक्सपोजरको कारण। सबैलाई थाहा छ र पैसा कमाउँदै। मान्छे को संख्या हो त्यहाँ काम गर्दै वर्गीकृत जानकारी छ। र हामीलाई यो पनि थाहा छैन कि यो व्यवसायले कती बनाउँदैछ। सरकारका लागि काम गर्ने मानिसहरु लाई मात्र यो थाहा छ एक उचित तरिकामा।
एयरलाइन्सहरू पैसा व्यवसाय गर्दै छन्
त्यसैले केवल यस प्रकारको व्यवसायमा व्यवसायिक लगानीकर्ता बन्न। तपाईंलाई अतीतमा विभिन्न व्यवसायहरू आवश्यक पर्दछ। धेरै मानिसहरू पनि व्यक्तिमा जान्दैनन्। र निश्चित छ कि यी कति मान्छे गर्दै छन्। सरकारको लागि बोलाइएका मानिसहरूको प्रतिशत मात्र जान्दछ कि यो सबै कसरी चलिरहेको छ। त्यसोभए, बस व्यवसायको प्रकारमा व्यवसायी लगानीकर्ता बन्न। निश्चित रूपमा, तपाईंलाई अतीतमा विभिन्न व्यवसायहरू आवश्यक पर्दछ। लगानी संरचनाको कारण। अनि निस्सन्देह, यस प्रकारको सम्झौतामा काम गर्नुहोस्। धेरै अनुभव चाहिन्छ। तर तपाईंले सरकार र शीर्षक र अन्य निजी लगानीकर्ताहरू सुनिश्चित गर्नु पर्छ तपाईं सहि व्यक्ति हुनुहुन्छ।
नम्बर 1 अमीरात समूह क्यारियरहरू
अमीरात समूह रोजगार खोज्नेहरूलाई काममा लगाइरहेको छ। खैर, यो कम्पनी सबैभन्दा ठूलो फर्म हो। र यो दिमागमा राख्दै, तिनीहरूबाट रोजगार प्रस्ताव प्राप्त गर्न लायक हुनेछ। अमीरेट्स कम्पनीहरूको समूह हो। त्यसो हो भने, जब सम्म तपाईं एक पटकमा आवेदन गर्नुहुन्छ। तपाईंसँग यो हुनेछ धेरै कम्पनीहरु संग तपाईंको आवेदन। लामो दौडमा यो यसको लायक हुनेछ। यो फर्म सामान्यतः बोल्दै संयुक्त अरब अमीरातमा सबैभन्दा राम्रो कम्पनी हो। यस क्षण तपाईंले यस कम्पनीको साथ सुरू गर्नुभयो। तपाईं महसुस गर्नुहुन्छ दुबई र अबू धाबी को शक्ति मा व्यापार मा प्रभाव.
नम्बर2फ्लाईदुई क्यारियरहरू
दुबई निश्चित रूपमा उड्नुहोस् एक प्रगतिशील संगठन को। फ्लाईडुबाईको साथ तपाईले सामान्यतया जॉब अलर्टको लागि साइन अप गर्न सक्नुहुनेछ। साथ साथै तपाईंको व्यक्तिगत डाटा थप्न। थप, आफ्नो सीवी दर्ता गर्नुहोस्। र पनि लाभ र संस्कृति मा एक नजर छ। त्यसोभए सामान्यतया यदि तपाइँ मद्दत समर्थन खोज्दै हुनुहुन्छ भने बोल्नुहुन्छ। अमीरात एयरलाइन्स क्यारियर सिटी कम्पनीसँग करियरहरू यो एक स्मार्ट विचार हो। निश्चित रूपमा, यो कम्पनीले तपाईंलाई मद्दत गर्न खोजिरहेको छ। यसबाहेक, र तपाईले तपाइँको अद्यावधिक पुनः सुरुवात पनि अपलोड गर्नुपर्छ। र केहि नौकरी अलर्टहरू सेट अप गर्नुहोस्। किनकि यो कम्पनीले तपाईंलाई लामो समयसम्म दिनेछ।
नम्बर3एयर अरब करियर
एयर अरबले इच्छुक कार्य प्रस्तावहरू प्रदान गर्दछ। The क्यारियरहरू कि कम्पनी उपलब्ध गराई विश्वव्यापी रूपमा रोजगारीका कामहरू प्रदान गर्दछ। जब तपाइँ रोजगार प्रस्ताव मा तपाइँको रुचि पाउनुहुन्छ। सामान्यतया बोल्दै, एक एयर अरेबिया कम्पनीले तपाइँलाई काममा लिनेछ। यसबाहेक, कम्पनी एचआर प्रबन्धकहरू तपाईको काम खोजीमा सबैभन्दा उत्तम चाहान्छन्। तिनीहरूसँग सुरू गर्न तपाईंले लागू क्लिक गर्न आवश्यक छ। त्यसो भए कुनै पनि पदका लागि छनौट गरियो। त्यसो भए पछि, तपाई अब लागू गर्नुहोस् बटनमा क्लिक गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइँसँग सिफ्ट प्रबन्धक काम हुन सक्छ। साउदी अरेबिया र ईन्जिनियरका साथ साथै बिक्री प्रबन्धकहरू टर्कीमा स्थिति। मध्य पूर्वी वा युरोपमा। अमीरात एयरलाइन्स क्यारियर एयर एयरर्बिया कम्पनीसँग। निश्चित रूपमा एक राम्रो विचार हुनेछ।
इमिरेट्स एयरलाइन्स क्यारियर - एयर अरेबिया क्यारियर
नहीं .4 एयर इंडिया नौकरी र क्यारियर
एयर अरबले इच्छुक कार्य प्रस्तावहरू प्रदान गर्दछ। कि क्यारियर कि कम्पनी उपलब्ध गराई विश्वव्यापी रूपमा रोजगारीका अवसरहरू हुन्। जब तपाईं रोजगारी प्रस्तावहरूमा आफ्नो रुचि खोज्नुहोस्। सामान्यतया, एक एयर अरेबिया कम्पनीले नयाँ कामदारहरू भर्ती गर्दछ। अवश्य पनि संयुक्त अरब अमीरातमा। अमीरात एयरलाइन्स क्यारियर एक दुबई शहर कम्पनी संग एक स्मार्ट आन्दोलन हो। यस समयमा तपाईले फाईलहरू डाउनलोड गर्नु पर्छ। यसबाहेक, विशेष रोजगार प्रस्तावको बारेमा जानकारीको टुक्राहरू जाँच गर्नुहोस्। र त्यसपछि यो कम्पनीको लागि आवेदन दिनुहोस्।
नम्बर5Wizz एयर जर्नल र क्यारियर
Wizz एयर कम्पनीले अमीरात एयरलाइन्स क्यारियरका लागि भर्ती गरिरहेको छ। साधारणतया बोल्ने, उनीहरूले तीन प्रकारका कामहरू प्रस्ताव गरिरहेका छन्। पहिलो जागिरको अवसर तपाईं पोल्याण्डमा पनि खोज्न सक्नुहुन्छ। केबिन चालक दलको क्यारियर अवसरों हो। अर्कोतर्फ, तपाईसँग कार्यालयको काम हुनेछ। र यो हुनेछ सञ्चालन मानव संसाधन, मार्केटिंग विभाग। निश्चित रूपमा यस प्रकारको कार्यहरूसँग प्राय जसो केसहरूमा, तपाईं कागजातहरू र कम्प्युटरहरूमा काम गर्नुहुन्छ। र Wizz Air को साथ तेस्रो विकल्प पाइलट बन्नु हो। सामान्यतया, यो एक उत्तम कम्पनी हो। किनभने तिनीहरूका पाइलटहरू आफ्नै शहरहरूबाट उडान गरिरहेका छन्। र अवश्य पनि, कम्पनी कानूनी वातावरण संग पूर्ण समर्थन र प्रशिक्षण प्रदान गर्दछ। त्यसैले दुबई शहर कम्पनीले तपाईंलाई यस कम्पनीको लागि आवेदन दिन सल्लाह दिन्छ। हाम्रो टीम दृढ विश्वास गर्दछ कि यो कम्पनीको साथ हरेक मिनेट यसको लायक हुनेछ। एमिरेट्स एयरलाइन्स क्यारियर ए संग WizAir क्यारियर वेबसाइट यो सुरु गर्न राम्रो हुनेछ।
नम्बर6ब्रिटिश एअरवेज क्यारियरहरू
अमीरात एयरलाइन्स क्यारियरका लागि अर्को कम्पनी। यस समय यूनाइटेड किंगडम कम्पनी संग। ब्रिटिश एयरवेज एक ठूलो कम्पनी हो, लन्डन, दुबई र न्यूयोर्क शहरमा भर्ती गर्दै। त्यसैले, खोज्दै एक राम्रो कम्पनी काम गर्ने तरिका हो उनीहरुको लागि। यो फर्म, सामान्यतया बोलेको, हीथ्रो एयरपोर्टमा भाँडामा लिदै। बेलायती व्यवसाय संग यादगार ग्राहक अनुभव बनाउन को लागी शक्ति छ। यदि तपाईंको प्रोफाइल उनीहरूको आवश्यकताहरू मिल्दछ भने। जहाँ जहाँ तिनीहरू काम, भूमि मा वा हावा मा। तपाईं गर्न सक्नुहुन्छ उनीहरूसँग राम्रो अवसर। चाहे तपाईं अनुभवी कार्यकारी हुनुहुन्छ वा भर्खरै स्नातक गरेको व्यक्ति। वा तपाईले भर्खरै युकेमा क्यारियर सुरू गर्दै हुनुहुन्छ तपाईले ब्रिटिश एयरवे क्यारियरमा हेर्नु पर्छ।
नम्बर7एटिहाड क्यारियर एयरवेज
त्यसैले केबिन क्यान्सरले रणनीतिमा कार्य गर्दछ र नियोजन कार्यका साथै साथसाथै व्यवस्थापन कार्यहरू पायलट समावेश गर्दछ र व्यावसायिक क्यारियरहरू गर्दछ। यो कम्पनीले संयुक्त अरब अमीरातसँग निश्चित विकास अवसरहरू प्रदान गर्नेछ। यो दुबई र अबू धाबी को धेरै राम्रो तरिकाले काम गरिरहेको छ। अनि निस्सन्देह, व्यापार मध्य पूर्व बीच आतिथ्य व्यवसायको केन्द्रमा आधारित छ। यदि तपाईं मानिसहरूको सेवाको बारेमा भावुक हुनुहुन्छ भने। यो कम्पनी निश्चित रूप देखि चालक दल को कार्य दल को लागि सबै भन्दा राम्रो स्थानहरु मध्ये एक छ। तपाईं काम पायलट वा एस एफआईको रूपमा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ रोजगारीको अवसर.
No .8 नार्वेजियन एयरलाइन नौकरिहरु
नार्वेजीयन् यो अर्को हो राम्रो काम गर्न काम। किनभने यो संगठनसँग विश्वमा सबैभन्दा नयाँ विमान बेडाहरू मध्ये एक छ। यसबाहेक, 260 भन्दा नयाँ नयाँ विमानहरू अर्डर गरिएका छन्। त्यसो भए, त्यो तथ्या .्कमा आधारित छ। यो लायक हुनेछ मानव संसाधन प्रबन्धन प्रतिनिधिहरु संग सम्पर्क राख्नुहोस्। नर्वेजियन एयरले निकट भविष्यमा कम्पनी भित्र धेरै सय नयाँ ओपनिंगको अनुरोधलाई व्यवस्थापन गर्ने छ। यसको मतलब यो हो कि कम्पनीलाई उनीहरूसँग सामेल हुन धेरै व्यक्तिहरू आवश्यक छन् नार्वेजियन परिवार। अनि निस्सन्देह, तपाईं तिनीहरूमध्ये एक हुनुहुन्छ भने। अगाडि जानुहोस् र आफ्नो विवरण अफगानिस्तान एयरलाइन्स क्यारियर दुबई सिटी कम्पनीसँग दर्ता गर्नुहोस्।
नम्बर9गोयर एयरलाइन रोजगार
त्यसैले यो समय हामी समीक्षा गर्दैछौं एक भारतीय कम्पनी हो। यो कम्पनी हो भारतमा धेरै राम्रो कम्पनी यसको नाम एयरलाइन्स इंडिया लिमिटेड जाने। यो भारतीय समूहहरूको जाँचको लागि हो र तिनीहरूको मिसन सुरक्षित र सुरक्षित परिवहन प्रदान गर्नु हो। तिनीहरूका सबै कर्मचारी र ग्राहकहरूको लागि। साथै सबै समय तिनीहरू सहयोगी कर्तव्यहरू र उनीहरूको आफ्नै ग्राहकसँग सम्झौताको लागि ध्यान दिँदै। र तिनीहरू सक्षम छन् अद्वितीय सेवा सिर्जना गर्न। सामान्यतया, विभिन्न व्यक्ति र उनीहरूको कर्पोरेट उम्मेदवारको लागि।
नम्बर 10 केएलएम रयल डच एयरलाइन
हाम्रो कम्पनीको समीक्षा गर्दै अर्को कम्पनी KLM हो कम्पनी वास्तव मा भर्ती छ आर्किटेक्टहरू साथै जमीन कर्मचारीहरू र मार्केटिङमा राम्रो अनुभव भएका व्यक्तिहरू। तपाईं सामान्यतया जागिर अलर्ट बोल्दै सबै तरिकाहरू सेटअप गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईले धेरै ठाउँमा काम गर्न सक्नुहुनेछ। साथै संयुक्त राज्य अमरीका क्यानाडा क्यानाडा र बेशक, हामी यसको मतलब छ। हामी कडा सल्लाह प्राप्त गर्न प्रयास गरिरहेका छौं। हुन सक्छ यो भारत बाट पत्ता लगाउन गाह्रो छ र पाकिस्तान। तर दुबई र दक्षिण अफ्रिका र पक्कै पनि अन्तर्राष्ट्रिय कामदारहरूबाट आउन धेरै सजिलो हुनेछ। जागिर पाउनेछ र राम्रो पारिश्रमिक पाउनेछ।
नम्बर 11 वर्जिन अटलांटिक
अब वर्जिन अटलांटिकको संसारको सबैभन्दा राम्रो कम्पनी यो कम्पनीको लागि समय हो धेरै अवसर प्रदान गर्न ग्राहक सेवाबाट उदाहरणका लागि एयरपोर्ट सेवाहरू ग्राहक सेवा केन्द्रमा। तपाईं तिनीहरूसँग भएको सबै महान अवसरहरू पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। तिमी सक्छौ सधैं काम पाउनुहोस् हेड अफिसमा। र व्यवस्थापन स्थितिबाट, तपाइँ यसलाई समीक्षा गर्न सक्नुहुनेछ फर्म र तपाईं काम गर्नेछ पनि दृश्यहरु को पछि पनि यदि तपाईं प्रतिभाशाली व्यक्ति हो जुन तपाईं विभिन्न भूमिकाहरु हो। अर्कोतर्फ, हामी सुपरकर्र्सबाट कार्गोको कुनै पनि ड्राइभिंग अनुभव छैन र तपाईं हुनेछौं। र ईन्जिनियरिङ् अपरेसन जुन हुनेछ र पाठ्यक्रमहरू।
अर्कोतर्फ, तपाईसँग नेतृत्व स्थिति हुनेछ। यस कम्पनीको साथ तपाई अग्रणी र पुरस्कृत हुनुहुनेछ जसले आफैंलाई विकास गर्छन्। र त्यसपछि हामीसँग ईन्जिनियरिंग र अपरेसन छ। र सामान्यतया बोल्दै, यो काम सही गर्न को लागी। तपाईंलाई ईन्जिनियरिङ् डिग्री चाहिन्छ। र अधिकांश काम लन्डन मा आयोजित गरिनेछ। र त्यसपछि हाम्रो भविष्यका पायलटहरू र उडान गर्ने व्यक्तिहरू छन्। उदाहरणका लागि, सबैभन्दा अद्यावधिक गरिएको हवाई जहाजमा उडान गर्नुहोस्।
नम्बर 12 जेट एयरवेज क्यारियरका अवसरहरू
जेट एयरवेजको साथ एमिरेट्स एयरलाइन्स क्यारियर। खैर, जेट एयरवेज छ सबै पृथ्वी भर उडान। तपाईं यस कम्पनीको साथ धेरै अर्कान्सास फेला पार्न सक्नुहुन्छ। र त्यहाँ धेरै अवसरहरू छन्। उदाहरण को लागी, तपाईं एक उडान अपरेशन वरिष्ठ प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, रोजगारको अवसरमा। साथ नै पहिलो अधिकारी। अर्कोतर्फ हवाई जहाज उडान गर्नका साथै हामीले राजस्व व्यवस्थापन गरेका छौं सञ्चालन व्यवस्थापन कम्पनी भित्र। अर्कोतर्फ, तपाईं पनि नर्सिंग कार्यहरू पाउन सक्नुहुनेछ। एक ग्राहक सेवा सञ्चालनको साथ।
त्यसोभए कम्पनीले प्रदान गर्ने सबै कामहरू गरौं। तिनीहरूलाई प्राप्त गर्न यसको लायक छ। किनभने तपाईं वरिष्ठ स्थिति पाउनुभयो भने। जेट एयरवेज यति ठूलो कम्पनी हो। उनीहरूले तपाईंलाई अझ बढी अवसरहरू प्रदान गर्दछन्। यसबाहेक, तपाईं आफैलाई प्रशिक्षण दिन सक्नुहुन्छ। र अत्यधिक पेशेवर व्यवस्थापन बन्नुहोस्। त्यसोभए दुबई शहरको कम्पनीले सहयोग गर्दै तिनीहरूसँग जानको लागि तलको चित्रमा क्लिक गर्नुहोस्। सामान्यतया, यो कम्पनी मुम्बई मा रोजगार को लागी उत्तम छ। त्यसोभए यदि तपाइँ एक भारतीय व्यापारी हुनुहुन्छ। तपाईंले निश्चित रूपमा यस कम्पनीमा CV पठाउनु पर्छ।
No .13 कुवैत एयरवेज क्यारियर
अय्यूब एयरलाइन्स क्यारियरहरूसँग कुवैत एयरवेज क्यारियरहरू छन्। अर्को कम्पनी हामी समीक्षा गर्न चाहन्छौं। कुवैत एयरवेजहरू छन्। किनकि तपाईं कहाँ सक्नुहुन्छ कर्पोरेट संस्कृति अन्वेषण गर्नुहोस्। यसबाहेक, कम्पनीले धेरै रिक्त स्थानहरू प्रदान गर्दछ। उदाहरणका लागि, अन्तर्राष्ट्रिय कर्मचारीहरूको लागि सामान्य रिक्तता। त्यसोभए यदि तपाईं पायलट हुन चाहनु भएको छ भने तपाई यस कम्पनीको साथ सुरु गर्न सक्नुहुनेछ। अर्कोतर्फ, यदि तपाईं वित्त पोषणको अवसरहरू प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ वा पनि वित्तीय कर्पोरेट प्रविधि रिक्तताहरू तपाईं तिनीहरूसँग काम पाउन सक्नुहुन्छ। र अन्तिममा हामीसँग छ मानव संसाधन नौकरिहरु र संचालन। वास्तवमा भन्ने हो भने यो कम्पनी एक वरिष्ठ व्यवस्थापन स्थितिको लागि पनि भर्ती गर्दैछ। दुबई शहर कम्पनी निश्चित रूपमा यस वेबसाइटमा रोजगार खोजी गर्नेहरूलाई ड्राइभ गर्दैछ। किनभने हामी सबैलाई थाहा छ हामी प्रदान गर्न सक्ने रोजगारहरू। तपाईं आफैंलाई व्यवस्थित गर्न र पैसाको राम्रो पैसा बनाउन पर्याप्त हुनुहुन्छ।
नम्बर 14 एयर माल्टा जॉब्स
अर्को कम्पनी हामीले तपाईंलाई परिचय दिन चाहान्छौं एयर एयर माल्टा हो। यो कम्पनी, सामान्यतया बोल्दै, युरोपको सानो देशबाट भर्ती गर्दै। तर ठूलो संगठन हो। र सामान्यतया कुनै पनि बिन्दुमा धेरै राम्रो बोल्दै। त्यसो भए, यदि तपाइँ एक कम्पनी प्राप्त गर्न चाहानुहुन्छ र काम गर्न नयाँ ठाउँ। एयर माल्टा संगठन प्रयास गर्नुहोस्। मानौं मानौं तपाईं युरोपलाई मन पराउनुहुन्छ र तपाईंलाई माल्टामा काम गर्दै हुनुहुन्छ। निश्चित रूपमा तपाईंलाई राम्रो सुरुवात दिनुहोस्। दुबई शहर कम्पनी सधैं अगाडि हेर्दै। रोजगार खोज्नेहरूलाई मद्दत गर्न र हामी प्रत्येक नयाँ व्यक्तिमा गर्व गर्छौं। हाम्रो फर्ममा जे भए पनि साइन अप गर्नुहोस्? वा एमिरेट्स एयरलाइन्स क्यारियर मध्ये कुनै पनि।
न। 15 क्यारियर मा क्यारियर
कन्टास एयरलाइन्समा क्यारियर। अर्को धेरै राम्रो कम्पनीको लागि काम गर्न। र न केवल अमीरात एयरलाइन्स क्यारियरहरू मात्र। कार्यकर्ताहरूको लागि राम्रो हो, त्यहाँ धेरै अन्य कम्पनीहरू छन्। यो मनमा, नौकरी खोजकर्ताहरू कन्टास टीमको भागमा लागे। तर यो सजिलो छैन, धेरै मामिलामा नयाँ सदस्य वृद्धिको स्तरको आवश्यकता पर्दछ। अनि तेस्पछि विभिन्न चुनौतीहरूमा जान। यस कम्पनीले एकदमै कठिन वातावरणमा काम गर्नेछ। Airlane मार्केट मा धेरै प्रतियोगिहरु काम गर्दै छन्। यसैले कन्टासले प्रायः आफ्ना कर्मचारीहरु बाट धेरै आशा गर्थे। तथ्यको रूपमा, व्यवस्थापनले असम्भव हासिल गर्न अपेक्षा गर्दछ। सकारात्मक पक्षमा, कम्पनीले सधैं आफ्नो टोली प्रबन्धकहरूलाई समर्थन गर्दछ। प्रशिक्षण र शिक्षा राम्रो नेतृत्व जस्तो देखिन्छ। यसबाहेक, कसरी विश्वास राख्नु र आदरको साथ अरूलाई सल्लाह दिनुहोस्। तल हेर्नुहोस्
संख्या .16 क्यारियर ईजियन मा
ईजियन निगम, अमीरात एयरलाइन्सका लागि अर्को फर्म करियर। साधारणतया बोल्ने, यो कम्पनी उच्चतम स्तरबाट सञ्चालन गर्दछ। तिनीहरूको मिशन ग्राहक र कर्मचारीको बीचको दूरी कम गर्न हो। तिनीहरू हो तपाईं खोज्न चाहनु भएको नजिकको नजिक हुनुहुन्छ। अर्को तर्फ, त्यहाँ धेरै यात्रीहरू र परिच्छेदहरू थिए र तिनीहरूलाई उच्च स्तरमा लगातार सेवाहरू प्रदान गर्न कोशिस गर्दै। मुख्य विचार बजार मा सम्मान र विकास छ। साथसाथै उनीहरूका कामदारहरू विकास गर्दै र स्थानीय समुदायमा उनीहरूका साझेदारहरूलाई सहयोग गर्न मद्दत गर्दै।
12 पछि 2012 लाख यात्रीहरू छन्। 145 गन्तव्यहरूमा उडान गर्दै र तिनीहरूले 1 अरब भन्दा बढी राजस्व बनाउँछन्। 45 देशहरूमा। यसबाहेक संगठनको 89% र सुरक्षित वातावरणको साथ मद्दत गर्दै। कम्पनी स्टार एलायन्स पार्टनर हो र उनीहरूले धेरै पैसा लगानी गरिरहेका छन्। त्यसोभए तपाईका स्थानहरू यो चाँडै नै उपलब्ध हुनेछ। र आउने कर्मचारीहरूका लागि बढ्दै गरेको ठूलो संभावना हुनेछ.
अस्ट्रियाई एयरलाइन्समा .17 सेयरहरू
अस्ट्रेलियाई एयरलाइन्स पनि बजार मा शीर्ष खेलाडी हो। अहिले कम्पनी धेरै व्यवसाय फाँटहरूको लागि भर्ती। यो दिमागमा राख्दै, त्यो एयरक्रूको साथसाथ यात्री सेवा एजेन्ट, पायलट, टेक्निकल अपरेसनहरू, हेड अफिस र इन्टर्नशिप पनि हो। अर्कोतर्फ, कम्पनीले धेरै सुझावहरू र दिशानिर्देश प्रदान गर्दछ कि तपाईं अमीरात एयरलाइन्स क्यारियरहरूको लागि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। उदाहरणहरूमध्ये अस्ट्रियाई एयरलाइन्स एक अद्भुत ब्लग हो। तिनीहरू वास्तवमा उनीहरूको बेग्लै र तिनीहरूको पायलट र सेवाबारे उनीहरूका टोलीबारे लेखिरहेका छन्। निस्सन्देह, यो अद्भुत र निश्चित रूपमा हेर्दै छ धेरै व्यक्तिले त्यस ब्लगबाट मान प्राप्त गर्न सक्दछ। त्यसैले केहि छ र तस्विरमा क्लिक गर्नुहोस् यसले तपाईंलाई तिनीहरूको पृष्ठमा लैजान्छ। निश्चित रूपमा अगाडि जानुहोस् र नौकरीको लागी आवेदन दिनुहोस् र आफैले काम गर्न प्रयास गर्नुहोस्।
No .18 Jobs दक्षिण अफ्रीकी एयरवेज मा
क्यारियर खोज्नु यो त्यति सजिलो काम होइन। अर्को कम्पनी जुन हामी यस लेखमा समीक्षा गर्न चाहन्छौं। दक्षिण अफ्रिकाका एयरलाइन्सहरू सामान्यतया यो कम्पनी बोल्दछन् बहु-पुरस्कार-विजेता एयरलाइन। मुख्य अफिस तपाईको ह्यारिसबर्गमा दक्षिण अफ्रिकामा आधारित छ। कम्पनीले विश्वव्यापी रूपमा 78 गन्तव्यहरू प्रदान गर्दछ। नकारात्मक पक्षमा यो एयरलाइनको साथ जान सजिलो छैन। किनकी तिनीहरू एक उत्तम भुक्तानी एयरलाइन्स हुन्। धेरै व्यक्ति वास्तवमै कोशिस गर्दैछन् तिनीहरूको साथ काम गर्न। र हामीले सम्झना छ कि दक्षिण अफ्रिका भिसा प्राप्त गर्न सजिलो छैन। त्यसैले तपाईं एक हप्तामा प्रत्येक पटक एकचोटि राख्नु पर्छ। र उनीहरूको हालको रिक्तता बारे पत्ता लगाउन प्रयास गर्नुहोस्। यस कम्पनीसँग सुरु गर्न अमीरात एयरलाइन्स क्यारियर दुबई सिटी कम्पनी गाइड एसएमएस स्मार्ट हुन्।
No .19 Lufthansa क्यारियर
वास्तविकतामा लफ्थान्सा कम्पनीको कुनै पनि व्यक्तिलाई परिचय हुँदैन। निस्सन्देह वैश्विक एयरलाइन उद्योगको सबैभन्दा ठूलो खेलाडि। र यस क्षणमा यस कम्पनीले आईटीबाट कामको एक टनको विशेषज्ञलाई अपरेसन अफ वरिष्ठ व्यवस्थापन समेत व्यवस्थापन गरेको छ। ग्राहक प्रबन्धक साथै एक सफाई सहायक। यस कम्पनीको लागि निश्चित रूपमा, तपाईं लगभग कुनै पनि काम पाउन सक्नुहुनेछ। एक मात्र नकारात्मक पक्ष पास गर्ने एक कठिन साक्षात्कार हो। सकारात्मक पक्षमा, तपाईं आफ्नो वेबसाइट धेरै राम्रो तरिकाले बनाइएका पाउन सक्नुहुनेछ। र तपाईं आफ्नो अनुप्रयोग स्थिति र व्यक्तिगत डेटा पनि जाँच गर्न सक्नुहुन्छ। कामको काम पनि लाग्छ नौकरी खोजकर्ताहरूको लागि उपलब्ध छ। यो मनमा, अमीरात एयरलाइन्स क्यान्सर सिटी कम्पनीसँग क्यारियरहरू छन् किनभने म पनि तपाईंको लागि उपलब्ध छु।
हामीसँग मात्र यो कम्पनीको सूचीमा रहेको ठाउँको ठाउँ छ। किनभने यो एक युरोपिक कम्पनी हो त्यसैले यसैले यो निकै गाह्रो हुन सक्छ युरोपमा भिसा प्राप्त गर्न। सकारात्मक पक्षमा, यो कम्पनी मध्य पूर्व र इजिप्टमा पनि लुकिरहेको छ। र केही अन्य धेरै देशहरू जुन हामी अहिले जाँच गर्न पनि सक्दैनौं। निश्चित रूपमा संयुक्त अरब अमीरात, कतार र संयुक्त राज्य अमेरिका।
No.20 सिंगापुर एयरलाइन्स क्यारियरहरू
सिंगापुर एयरलाइन्सहरू यस कम्पनीको बारेमा धेरै मानिसहरू यहाँ छैनन्। तर यो कम्पनीको अन्तिम 20 वर्षमा व्यावसायिक विकास छ। मुख्य विचार हो कर्मचारीहरूलाई उनीहरूको पूर्ण सम्भावनात्मक वृद्धि प्राप्त गर्न मद्दत गर्दछ। तपाईं तिनीहरूसँग किन काम गर्नुहुनेछ तपाईं र यस कम्पनी मा अधिक प्रदान को लागि व्यापक र विकास तपाईं प्राप्त गर्न आफ्नो व्यवसाय बढाव हुनेछ। र सबैको लागि जसले तिनीहरूसँग सुरु गर्न चाहन्छ।
कम्पनी ई उच्च शिक्षा योग्यता प्रदान गर्दछ। सामान्यतया बोल्दै, यदि तपाई कम्पनीको खोजी गर्दै हुनुहुन्छ भने कसले तपाईंलाई भिसा प्रायोजन प्रदान गर्दछ। निश्चित रूपमा, सिंगापुर एयरलाइन्स तपाइँको लागि त्यो गर्नेछ। उनीहरुलाइ एमिरेट्स एयरलाइन्स क्यारियरको लागि उचित छैन। तर निश्चित रूपमा एक क्यारियर खोजीको रूपमा लागू गर्न लायक। तिनीहरूको वेबसाइट र तपाईं तल तल हेर्नुहोस् आफैलाई निर्णय गर्नुहोस् यदि यो यसको लायक छ वा होइन.
नम्बर 20 कतर एयरवेज क्यारियरहरू
कतार एमिरेट्स एयरलाइन्स को लागी मध्य पूर्व मा क्यारियर। कतारमा सयौं अवसरहरू। यो कम्पनी उनीहरूलाई वास्तवमा हेर्दै गरेको घडीको वरिपरि राम्ररी परिचित छ प्रबन्धकहरूको लागि र व्यापार विकास कार्यकारीs। प्राविधिक ईन्जिनियरिङ् टोली साथै हवाईअड्डा सेवाका कर्तव्य कर्मचारीहरू, केबिन चालक दल र कार्यकर्ताहरू। यस कम्पनीको सकारात्मक पक्षमा, तपाईं पनि आफ्नो अनुप्रयोगमा जाँच गर्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईं भावी रिक्तित्वहरूमा रुचि राख्नुहुन्छ भने जागिर अलर्टहरू सेट अप गर्नुहोस्। किनकि त्यहाँ तपाईं प्रदान गर्न सक्षम हुन सक्छ काम तपाई महिलाको लागि खोज्दै हुनुहुन्छ.
वास्तवमा भन्ने हो भने, तिनीहरू केवल एक मात्र हुन् जुन भविष्यको वास्तविक रूपमा प्रदान गर्दछ वेबसाइटमा क्यारियर विकास योजना अवसर। निश्चितको लागि यो अगाडि जानको लागि लायक हुन्छ र 50 रिक्त पदहरूमा कम्तिमा 200 को लागी आवेदन गर्नुहोस्। नकारात्मक पक्षमा, यो कतार हो त्यसैले यो काम पाउन सजिलो छैन। एकदम धेरै संसारभरका मानिसहरू एक अद्भुत मौका खोज्दैछन् यस देशमा त्यसैले तपाईं भारतीय, पाकिस्तानी, र अन्य मध्यपूर्व व्यवस्थापन प्रतिनिधिहरूसँग लड्न हुनेछ।
अमीरात एयरलाइन्स क्यारियरका लागि निष्कर्ष
यस खण्डमा, हामी निष्कर्ष गर्छौं। यसैले अधिकांश मानिसहरू सबै भन्दा छिटो बढ्दो एयरलाइनमा काम खोज्दैछन्। सामान्यतया धेरै कामहरू म एक पायलट र मैदानमा सामानको रूपमा प्रस्ताव गरिरहेको छु। एयरलाइन्स कम्पनीहरू प्रयास गर्दै छन् र छिट्टै नेटवर्क विस्तार गर्दै। र विशेष गरी संयुक्त अरब अमीरात मा कम्पनीहरु। संयुक्त राज्य अमेरिका र यूरोपको अहिले सम्म र कसरी छिटो एयरपोर्ट सेवाहरूमा बढ्दैछ। वास्तवमा यस प्रकारको व्यवसायको साथ। तपाईं धेरै फाँटहरूमा उपलब्ध रोजगारहरू अन्वेषण गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले सम्म तपाई रणनीति र योजना रोजगार खोज्नुहोस्।
हवाई अड्डा र सञ्जाल अपरेशन कार्य। प्राविधिक अपरेसन र धेरै प्रकारका कामहरू। हवाईअड्डामा सुरक्षा पनि एकदम ठूलो छ। अर्कोतर्फ, हामीसँग गुणवत्ता कार्यहरू छन्। विमानस्थल को रखरखाव योजना र रसद फील्ड। त्यसपछि कर्पोरेट र व्यावसायिक कामहरू पनि यसको लायक हुन। धेरै भन्दा बढी कामहरू ग्राहक सेवा केन्द्रित छन्। त्यसैले तपाईं एक कार्यकर्ताको रूपमा हुनुहुन्छ तपाईंले हवाईअर्जीमा ग्राहक अपेक्षाहरू भन्दा बढी आवश्यकता पर्नेछ।
दुबई शहर कम्पनी नौकरी चाहने को लागी
दुबई सिटी कम्पनी तपाईलाई हाम्रो विभिन्न लेखमा हेर्न को लागी देख्नुहुन्छ। हाम्रो ब्लग मुख्यतः अय्यूब खोजीकर्ताहरूको लागि गरिन्छ। अब सम्म तपाईका लागि उत्तम काम गर्ने कम्पनीहरू फेला पार्नुहोस्। आशा छ, तपाईंले प्रदान गर्नुभएको सबै कम्पनीहरूमा तपाईंले आवेदन गर्नुभएको छ। किनभने हामी एक नौकरी खोजकर्ता कम्पनी हो र काम खोज्दै हुनुहुन्छ अद्भुत कामहरू फेला पार्न अरूलाई मद्दत गर्न। हाम्रो कम्पनी दुबईमा आधार छ। यसैले हामीले अमीरात राखेका छौं। र हामी यस व्यवसायमा धेरै गर्व छौं। साथै, हामीले संसारभरका थुप्रै ब्रान्डहरू निर्माण गर्न मद्दत गरेका छौं। त्यसैले, एक हो हाम्रो नौकरी खोजीकर्ताहरूको एकदम विश्वभरको काम। हालसम्म हामीले साउदी अरेबियाका रोजगारी खोज्नेहरूलाई सहयोग गरेका छौं। साथै नम्बर एक रूपमा भारतीय-पाकिस्तानी। फिलिपिन्स र दक्षिण अफ्रिकीहरू ईरानीहरू र अमेरिकी नागरिकहरूसँग.
तपाईंलाई फेरि हेर्नको लागि तत्पर हुनुहुन्छ!
हाम्रो कम्पनी हाम्रो ग्राहकहरु मा धेरै गर्व छ। माथी 50,000 काम खोज्नेहरूले हाम्रो कम्पनीबाट काम पाए। जुस गरिएको प्रत्येक क्षेत्र त्यसोभए हामी के भन्छौं। ईन्जिनियरिङ् हो मार्केटिङ, मानव संसाधन, नर्सिङ, यो, ग्राहक सेवा र शिक्षा। हामीले प्रदान गर्ने सेवाहरू अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यको लागि। जे भए पनि तपाईले कस्तो काम गर्ने निर्णय गर्नुहुन्छ तपाई हाम्रो कम्पनीको साथ लिनु हुन्छ। हामी तपाईंलाई प्रदान गर्न खोजिरहेका छौं। त्यसैले हाम्रो वेबसाइट जाँदै र अनुसन्धान गरिरहनुहोस्। किनभने हामीसँग धेरै चीजहरू छन् जुन तपाईंको लागि काम गर्न सक्छ। ए नौकरी खोजकर्ता संसारभर.